Hanatsara ny Adobe Premirere ho an'ny 'Export Quick' | Famoronana an-tserasera
Una vaovao farany mahaliana no tonga androany ao amin'ny Adobe Premiere miaraka amin'ny 'Quick Export' amin'ity volana Novambra ity; Ary toy ny nataon'i Adobe tamin'ny fanavaozana isam-bolana miaraka amin'ny vaovao lehibe noho ny zava-dehibe.
Ary bebe kokoa amin'ny fotoana anaovan'ny mitaky bebe kokoa ny mpampiasa sy ny matihanina ny horonan-tsary amin'ny sehatra rehetra hahazoana izany atiny kalitao izany amin'ny mpanaraka anao. Ankoatry ny 'Quick Export' dia azonao atao koa ny miantehitra amin'ny zava-bita namboarina ho an'ny AMD APUs sy ny fitomboan'ny fanohanan'ny fiteny ao amin'ny Premiere Rush.
Nanomboka tamin'ny andron'ny androany dia tonga ny fanavaozana ny Adobe Premiere miaraka amin'ny Quick Export (roa volana lasa izay dia nanana an'ity vaovao ity isika) ary izany dia ahafahantsika miasa haingana sy mahomby kokoa amin'ny alàlan'ny fanolorana fidirana mivantana amin'ireo toerana fanondranana malaza sy be mpampiasa indrindra.
Ny tiako holazaina dia fantatro afaka misafidy avo lenta avo lenta output H.264 miaraka amin'ny fikirana endri-tsoratra na mifanitsy amin'ny lisitra iray izay ananantsika preset maromaro. Ny tanjona dia ny ahafahantsika manohy mampihena ny haben'ny fisie raha tsy manadino ny iota kalitao, fa miaraka amin'ny fahombiazana hatrany amin'ny fotoana mba tsy handany ny iray segondra amin'ity fihetsika ity.
Ankoatra an'io fisehoan-javatra vaovao lehibe io ao amin'ny Premiere, nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana ho AMD APUs ary izany dia mitarika fanatsarana ny hafainganan'ny famadihana hatramin'ny 4 heny haingana kokoa. Ho hitantsika ihany koa ny filalaovana 4K malefaka kokoa amin'ny fampiasana fitadidiana tsaratsara kokoa.
Raha mankany Premiere Rush isika, misy sary kely ho an'ny zana-peo tsirairay ary fanohanana ireo fiteny vaovao toa ny holandey, poloney, soedoà, tiorka ary sinoa nentin-drazana.
Una andiam-baovao mifandraika amin'ny Adobe Premiere ao amin'ny kinalan'ny birao sy ilay hoe Rush ho an'ny mobiles izay manatsara ny fizotran'ny asa amin'ny fanaovana horonantsary isan-karazany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Adobe Premiere dia nohavaozina miaraka amin'ny 'Quick Export' amin'ny fanavaozana ny volana novambra
Mpanonta sary maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny solosainao